ဘယ်လိုလဲ သို့ ရှေးခယျြ တစ်ဦး မြင့်သော chတစ်ဦးir ဘို့ bတစ်ဦးbies？ - Ningbo Xiတစ်ဦးngshတစ်ဦးn Wတစ်ဦးhsun Plတစ်ဦးstic & ရော်ဘာ ထုတ်ကုန်များ Co. , Ltd မှ
ကလေး fixed အစားအစာကိုစားအခြိနျ မှစ. , တကမြင့်မားသောကုလားထိုင်ကိုဝယ်ယူစဉ်းစားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မြင့်မားသောကုလားထိုင်ဒီကုလားထိုင်2မှ3နှစ်သမီးအရွယ်ကနေသားသမီးတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။ တစ်ဦးအကြမ်းခံမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါရန်။ သင့်အနေဖြင့်အဆင့်မြင့်ကုလားထိုင်ထဲတွင်သူငယ်နို့တိုက်ကျွေးဖို့လှုပ်ရှားမှုဗဟိုဌာနအဖြစ်မြင့်မားကုလားထိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်ကို၎င်း, တစ်မိသားစုလုံးစားရသောအခါသူကုလားထိုင်၌ထိုင်နှင့်မျက်မှောက်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်းအတွင်းရှိနိုင်ပါသည်။
မြင့်မားသောကုလားထိုင်များစွာသောအမျိုးအစားများအချို့မြင့်မားသောကုလားထိုင်ကလေးရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသည်နှင့်အညီပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုခံရနိုင်သည်, တချို့အခြားသူတွေအာကာသကယ်ဖို့စားပွဲတွဲနိုင်ပါတယ်စဉ်လွယ်ကူသောထမ်းများအတွက်အသေးစားကုလားထိုင်မှပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်ပုံမှန်မြင့်မားသောကုလားထိုင်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာရနိုင်ရှိပါတယ်။ ။
သစ်သားမြင့်မားသောကုလားထိုင်အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုသစ်သားမြင့်မားသောကုလားထိုင်နဲ့တူလှပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်အဘို့, ထိုင်ခုံများလွန်းနစ်မြုပ်နေသောနှင့်ချိန်ညှိမရနိုင်, နှင့် footrest ဆွဲထားဖို့ကလေးရဲ့ခြေမဖြစ်စေတဲ့လွန်းနိမ့်သည်: အချို့ရှိအားနည်းချက်များဖြစ်ကြသည်။ နှင့်သစ်သား pallets ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သတ္တုပြားထက်စင်ကြယ်သောစောင့်ရှောက်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲပါ၏ ထိုကဲ့သို့သောကုလားထိုင်လည်းဆက်ရေးများမှာအာကာသတွေအများကြီးတက် ယူ. ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲသည်။
2, ခိုင်ခံ့သောပလပ်စတစ်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကပြီးနောက်ကြောင့်ပြင်ပမှာအလွန်အဆင်ပြေထိုင်ခုံဖြည့်ရန်လိုအပ်
4, clean ရန်လွယ်ကူ
5, pallet fix နှင့် disassemble ရန်လွယ်ကူသည် - ကတစ်ဦးတည်းသာလက်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
6. အဆိုပါတားမြစ်ကိရိယာတင်ပါးဆုံရိုးများနှင့်ကလေး secure မှခြေထောက်အကြားဖြတ်သန်း; လက်ပတ်ကြိုးညှိနိုင်ပါတယ်
7. ကလေးကုလားထိုင်၌တည်ရှိ၏အခါ, လှိမ့်အနေဖြင့်ကုလားထိုင်ကိုတားဆီးဖို့ဘီး lock
8. ကလေး၏ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုကိုက်ညီဖို့အချိန်မရွေးကုလားထိုင် Adjust ။
အစားအသောက်အကြားအသုံးပြုမှုအတွက်ကုလားထိုင်တက်ခေါက်ကသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမရသည့်အခါ 9. ။ ပြင်ပမှာအစာစားသောအခါ, ကိုလည်းသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။